Amahedfoni amahle kakhulu we-iPhone 12, 12 Pro Max & Mini - Izesekeli
Amahedfoni angenye yezesekeli ezidingeka kakhulu kulezi zinsuku kubantu abaningi kuyisidingo ngenkathi kwabanye, kungaba umkhiqizo wokunethezeka. Ngakho-ke abantu abaningi abakwazi ukuyijabulela uma bengenayo ihedfoni yekhwalithi enhle.Ngo-23 Okthoba 2020 i-iPhone 12 yethulwa yinkampani yakwa-Apple. Imvamisa, le nkampani yethula izingcingo ngazo zonke izesekeli, kepha kulo nyaka ishintshe isitayela sayo yethula ifoni entsha ngaphandle kwamahedfoni neshaja.
Abasebenzisi abaluthandanga kakhulu lolu hlelo futhi badumele ngoba kuzodingeka basebenzise imali ezintweni zokuhlobisa ngisho nangemva kokuthenga iselula ebizayo. Abantu nabo bebekhathazekile njengoba bengazi ukuthi yimaphi ama-earphone asezingeni eliphakeme.
Kodwa-ke, lokho akuyona inkinga njengoba namhlanje sizokhuluma ngezinye zezinhlobo ezinhle kakhulu zamahedfoni alungele i-iPhone esanda kwethulwa, i-12,12Pro Max, ne-Mini. Sizobe sixoxa ngezinhlobo ezinhle kakhulu zama-earphone ezongayo futhi ezinekhwalithi enhle.
Sonke siyazi ukuthi kunezinkampani ezingamakhulu ezikhiqiza izinkulungwane zama-earphone, kepha akuzona zonke ezanele ngokwanele. Izinkampani eziningi zize zithengise mbumbulu, namakhophi ezinto zoqobo ukuze wonge imali yakho futhi ugweme ukungena kumgunyathi, sizokunikeza ezinye zezinhlobo ezinhle kakhulu zama-earphone.
Funda futhi mayelana:
Izinombolo ze-iPhone 12 Pro Max Model - A2342, A2410, A2411, A2412
Amahedfoni amahle kakhulu nama-EarBuds Ochungechunge lwe-iPhone 12:
1. Ama-Apple AirPods
I-Apple Airpods ingenye yezinhlobo ezinhle kakhulu zamahedfoni umuntu angabamba izandla zakhe kuwo. Yize lawa ma-headphone ezobiza kancane kodwa angenye yezinto ezihamba phambili, futhi njengoba futhi evela enkampanini efanayo eyi-Apple izosebenza kahle nge-iPhone 12 entsha, futhi iluchungechunge. Lawa ma-AirPod anempilo ende yebhethri.
Ibhethri elimangalisayo lihlala amahora angama-24 ngaphandle kokushaja. Lawa ma-AirPod abuye abe ne-chip H1 enikezela ngoxhumano oluzinzile nolusheshayo futhi oluqinisekisa umsindo we-crystal clear. Ibuye ibe nokuphakama okucacile nokuphansi nge-Good Bass. Lawa ma-AirPod anesisindo esincane futhi ayaphatheka.
Ingxenye ehamba phambili ngakho ukuthi ingaxhunywa ngokuzenzakalela ne-iPhone ngokushesha nje lapho uvula ibhokisi. Lawa ma-AirPod nawo angakhokhiswa ngamabhange kagesi, futhi anezinhlobo ezahlukahlukene zezinzwa ongakwazi ukwenza ngazo eminye imisebenzi ngenkathi usebenza.
2. Crave Wireless Earphone for iPhones
Lezi yizinhlobo zesibili ezihamba phambili zama-earphone nabasebenzisi be-iPhone. Lawa ma-earphone enzelwe abasebenzisi be-iPhone ngokukhethekile. Lawa ma-earphone angasebenza cishe amahora angu-8 uma esekhokhiswe ngokuphelele. Crave Earphones ingakunikeza ngomsindo omkhulu ngokushaya amabhasi nemisindo ejulile.
Lawa ma-earphone awangenwa ngamanzi, ngakho-ke mancane amathuba okuthi angabhujiswa ngenxa yomjuluko. Lawa ma-earphone angcono kakhulu kubantu abaphila impilo ematasa njengoba bekwazi ukuziqala ngokushesha futhi Lalela umculo noma ukuhambela izingcingo ezivela kunoma iyiphi ingxenye yendlu noma yehhovisi labo.
3. IBoltune Wireless Headphone
Lawa ma-Earphone azoxazulula inkinga yakho yesikhathi sebhethri njengoba inebhethri le-500mAh. Isici esihle kakhulu salawa ma-headphone Ngabe Amashaja Ngokushesha, futhi ungathola amahora we-2 wesikhathi sokudlala ngemuva kwemizuzu engu-5 kuphela yokushaja.Ikhwalithi yomsindo nokucaca kwalawa mahedfoni kuzokwenza uthandane namahedfoni. Lokhu kuyasiza futhi kuyaphatheka.
Abasebenzisi bangazilungisa ngokuya ngosayizi wekhanda labo bese bazigoqa ngokwenduduzo yabo ngaphandle kokukhathazeka ngokuthi bazolimala. Abasebenzisi bangasebenzisa ikhebuli yebhethri engu-3.5mm ukushaja ama-earphone.Lokhu kunikwa amandla nge-Bluetooth V.5.0, ngakho-ke ukuxhumana kuzinzile futhi kunenzuzo Kumabanga amade nawo. Kodwa-ke, lawa kuphela amahedfoni amahle kakhulu wabasebenzisi be-iPhone 12.
4. I-Tozo Wireless Earbuds Enesethi Yokushaja Okungenantambo
Lokhu futhi kungenye yezinhlobo ezinhle kakhulu zamahedfoni kubasebenzisi be-iPhone. Ibhethri lale headphone lingahlala kuze kufike emahoreni angu-3.5 ngemuva kokushaja okukodwa okuphelele. Ibhange lokushaja liphinde linikeze ngamahora we-9 wesikhathi sebhethri se-HeadPhones. It Ubuye stereo umsindo sici ngesikhathi socingo. Ngokufanayo, futhi ine-Bluetooth V .5.0.
Ikhwalithi yomsindo yalawa ma-Earbuds iyamangalisa njengoba uTozi esebenzise abashayeli bomsindo ekulaleleni okuhle komculo & ukubukela ama-movie . Kulula ukubhangqa, abasebenzisi bangavula ikesi, futhi bazoxhuma ngokuzenzakalela ku-iPhone yakho.
5. IBose Quiet Comfort 35 Ama-headphone we-Bluetooth angenantambo
Impilo yebhethri yalehedfoni ingamahora angama-20 ngemuva kokushaja okukodwa okuphelele. Noma lawa ma-earphone engakhokhisiwe, abasebenzisi bangawasebenzisa ngosizo lwentambo yomsindo, enikezwa ngamahedfoni.Lawa mahedfoni angakhokhiswa ngenkathi eshajwa. Ama-headphone nawo anohlelo lwamarobhothi afana ne-Alexa, futhi ngosizo lwalesi simiso, abasebenzisi bangakwazi ukwehlisa noma ukukhuphula ivolumu ngaphandle komzamo omkhulu.
Futhi inesici sokukhansela umsindo esiteji 3 esicindezela umsindo wangaphandle nokwenza Umsindo uzwakale. Futhi inombhobho owenqaba imisindo yangaphandle, ukuze kungabikho ukuphazamiseka ngesikhathi sezingcingo.
6. I-Letscom Waterproof Wireless Earbuds
Lawa ma-Earbuds nawo angabizwa ngokuthi ama-sporty Earphones ngoba ngeke avele Lapho abasebenzisi benza izivivinyo eziyinselele nemisebenzi.
Umsindo walawa ma-headphone ucacile njenge-crystal l, futhi okuphansi nokuphakama kuyezwakala. Ibuye ibe nenguqulo ye-4.1 ye-Bluetooth enokuxhumeka okuzinzile kanye nekhwalithi emnandi yomsindo. Ingasetshenziselwa izingcingo ngoba inemakrofoni eyakhelwe ngaphakathi kuyo. Lezi zindlebe zinebhethri Isikhathi samahora ayi-8. Futhi inezinkinobho zawo wonke umsebenzi.
7. Ama-headphone akwa-Sony WH100XM3 Angaphezulu Kwendlebe Nge-Mic
Isikhathi sebhethri salawa ma-Earphone ngu-30Hours kuphela ngemuva kwe-10 Minute Charge. Lawa ma-earphone nawo anezintambo ongazisebenzisa ukulalela umculo noma ngabe ibhethri linalo. Izinga lalo mkhiqizo liyafana namanye ama-earphone akwa-Sony, kodwa okuyingxenye enhle kakhulu ngawo ukuthi linombhobho owakhelwe ngaphakathi kuwo, ngakho-ke akukho Ukuphazamiseka okwenziwa ngesikhathi sezingcingo.
Abasebenzisi futhi bangalungisa ivolumu futhi bakhethe ucingo ngokuthepha kumahedfoni.
8. Ukukhanselwa Kwemisindo Esebenzayo YECOWIN
Impilo yebhethri yalezi zindlebe icishe ibe ngamahora angama-30 ngemuva kokukhokhiswa okugcwele. Abasebenzisi bangashintsha masinyane itimu ngosizo lwentambo. Lawa mahedfoni aphathekayo kakhulu njengoba enesisindo esincane. Lawa ma-Earphone eza necala, futhi lawa ma-Headphone nawo ayakwazi ukuguquguquka futhi ayagoqeka.
Ikhwalithi yomsindo yalezi zindlebe ihle kakhulu njengoba inezikhulumi ezivelele ezingama-40mm, ezinciphise amazwi ahlukene futhi zithuthukisa ikhwalithi yama-audios.
Lawa amanye ama-earphone amahle kakhulu we-2020 ongawasebenzisela i-iPhone 12 entsha nezinye izinhlobo zayo. Lawa mahedfoni angama-earphone akalwe kakhulu abasebenzisi angabathola. Lawa mahedfoni asekela kakhulu i-iPhone kepha angasetshenziselwa namanye amafoni. Sengiphetha, noma ngubani ozimisele ukuthenga i-iPhone 12 futhi ukhathazekile ngokuthi iyiphi i-headphone okufanele ayithole kufanele abheke imininingwane engenhla ngoba izokwehlisa umsebenzi wakho ngo-95%.
Ama-headphone amahle kakhulu wokubuka ama-movie
Ungasithola Kanjani Isivivinyo Samahhala Sezinsuku ezingama-30?
i-youtube video mp3 converter mahhala
izinsiza zokusakaza ezihamba phambili zokushintsha ikhebuli
amakhodi wesipho sama-amazon 2016
indawo yokulanda i-movie yamahhala
bukela ama-movie online mahhala ukulanda okugcwele kwe-movie